Sidee looga Joojiyaa Spam Shamaad laga Bilaabo Dheefahaaga iPhone? Talobixin ka socota ciriftirka
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatid muhiimada isticmaalka furaha ereyada adag iyo inaad u hawlgelisid laba-saameeyaal aqoonsi (2FA) qalabka Apple. Boqolaal kun oo farriimo spam oo aan faa'iido lahayn oo Shiinaha ah ayaa loo diraa oo ka soo baxa qalabka iPhone. Heshiiska iMessage ee la afduubay ayaa buuxin kara iPad-yada, iPhone, Mac ama qalabyo kale oo la mid ah qashin-qubka iyo gobbledygook badan marka aad ka fekereyso. Farsamo ahaan hadalka, taasi ma aha khariidad laakiin waa calaamad muujinaysa in qof uu qiray eraygaaga sirta ah iyo wuxuu isticmaalayaa qalabkaaga waxqabadyada nacasta ah.
Andrew Dyhan, khabiir sare oo ka socda Semt , ayaa ku takhasusay arrimo wax ku ool ah oo kaa caawin doona inaad ka badbaado weerarradaas - logo making program.
Dad badan oo isticmaala ayaa udubdhacay mashaariicdaas. Shirkadda ammaanka ee fadhigeedu yahay England Sophos ayaa daabacday boosteejo ku saabsan barta ammaanka ee qaawan, halkaas oo ay la wadaagto waayo-aragnimada dadka isticmaala iPhone. Mid ka mid ah dadka isticmaala ayaa sheegay in iPhone uu si sharci darro ah loogu isticmaalo inuu u diro farriimo been abuur ah oo Shiinaha ah oo dhammaan saaxiibbada iyo xubnaha qoyska. Warbixinta jebinta xogta marnaba lama soo sheegin, mana jirto siyaabaha loo soo saaro erayga sirta ah ee qalabkiisa iOS. Xaaladahan oo kale, maaha suurtagal in qofku sheego waxa dhici doona, laakiin Apple Inc. ayaa bilaabay John Munn oo ka yimid magaalada Belfast oo ku saabsan dhibaatada, isagoo ku doodaya in dadka isticmaala Android inay ka cabanayaan arrinta sannadka..Dhowr lambar sir ah oo la adeegsado iPhone ayaa la qiyaasi doonaa, xisaabtana waa la jabsaday maalin kasta. John ma ahayn dhibanaha kaliya ee Sophos baaray arinta waxana ay ogaatay in Apple aysan helin cabasho ku saabsan baaritaankeeda isla markaana ay horey u xallisay arrimo badan.
Ugu horreyntii, dadka isticmaala waxay helayaan fariin sheegaya in aqoonsiyada Apple-ka ay ka heleen goobo ama qalab aan la garanayn. Haddii aad hesho ogeysiisyada noocaas ah ee kombiyuutarkaaga, ma jirto wax aad sameyn kartid. Laakiin haddii aad fariin ka hesho telefoonkaaga gacanta, waa inaad gujisaa badhanka OK. Si kastaba ha noqotee, marka farriinta bilawga ah la helo, daadinta ayaa bilaabi doonta. Qalab badan oo qalab ah ayaa maalin walba ku duugan. Isticmaalayaasha sidoo kale waxay ka cabanayaan emojis iyo qoraallo laga helo ilo laga shakisan yahay, farriimahaasina waxay ku qoran yihiin gebi ahaan luqadda Shiinaha.
Noocyo isku mid ah ayaa loo diraa kumanaan qof oo ka soo jeeda akoonka cudurka qaba. Haddii aad turjumeyso farriimahaas, waxay kuu diri karaan casino ama makhaayad ku taalla Makau. Waxaa jira fursado ay jabsadayaashu rabaan inay macluumaadkaaga ka xadaan adigoo isticmaalaya magacyada casinos caan ah, laakiin hawlaha noocan oo kale ah waxay keeni doonaan xayiraadaha joogtada ah ee spam. Haddii ay tiraahdo "macluumaad dheeraad ah", taas macnaheedu waxa weeye in weeraryahannadu ay heleen eraygaaga sirta ah ama waxay soo qaadeen xogtaada si ay u jebiyaan qawaaniinta internetka. Apple ayaa sheegaysa in aysan suurtagal ahayn in la helo akoontada iMessage-ka ee userka, laakiin koodhka marar badan ayaa isticmaalaya dadka isticmaala oo u wareejiya qadarka qashinka. Fursadaha ayaa ah isticmaalaha isticmaalay ereyada sirta ah ee jebinta macluumaadka, sida LinkedIn iyo Yahoo. Waxaa laga yaabaa in ay isticmaalaan sirta isku midka ah ee xisaabaadka kala duwan, iyagoo galinaya kombiyuutarrada si ay u helaan aqoonsiyo email oo kala duwan oo leh ereyga sirta ah. Gabagabada, waa in aad isticmaashaa furaha ereyada adag ee laga yaabo in aan lagu qiyaasin khaanadaha. Waa inaad si joogta ah u cusbooneysiisaa lambarkaaga sirta ah isla markaana waxaad sii wadaa 2FA. Haddii aad qabto wax walaac ah oo ku saabsan amniga xisaabtaada, waa inaad hubisaa talooyinka Apple-ga